किन मनाइन्छ श्रीकृष्णजन्माष्टमी ? यस्तो छ धार्मिक मान्यता
२o७५ भदौ १७ आइतबार
आज विश्वभर हिन्दुधर्मावलम्बीहरूले भगवान् श्रीकृष्णको जन्मोत्सवको स्मरण गर्दै श्रीकृष्णजन्माष्टमी मनाइरहेका छन् । श्रीकृष्णजन्माष्टमी प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण अष्टमीमा पर्छ । संसार र धर्मको रक्षाका लागि तथा द्वापर युगमा बढ्दै गरेको आसुरी प्रवृत्तिको विनाश तथा सज्जनहरूको रक्षा गरी सनातन धर्मको संरक्षणका लागि भगवान् श्रीकृष्णको अवतरण यस पृथ्वीमा भएको हो । श्रीमद्भगवद्गीतामा भगवान् श्रीकृष्णले आफ्नो अवतारको प्रयोजन आफैँ बताउँछन् :
भगवान् श्रीकृष्णको जन्म र लीलाप्रसङ्ग
द्वापर युगमा उग्रसेन नाम गरेका राजा थिए । उनका छोरा कंस र छोरी देवकी थिइन् । दाजु कंसले आफ्नी बहिनीको विवाह आफ्ना मित्र वसुदेवसँग गरिदिई बहिनी ज्वाँइलाई पु¥याउन बाटोमा जाँदै गर्दा आकाशवाणी सुन्छ “कंस ! तँ जसलाई पुर्याउन जाँदै छस्, उसकै आठौँ गर्भबाट तेरो मृत्यु हुनेछ ।”
आकाशवाणी सुनेपछि कंसले आफ्नी बहिनीलाई तत्कालै मार्न तयार भयो । वसुदेवले आफ्ना प्रत्येक सन्तान जन्मने बित्तिकै कंसलाई दिने प्रण गरेपछि मात्र कंस मान्न तयार भयो अनि वसुदेव र देवकी दुवैलाई कारागार चलान ग¥यो । क्रमशः छैटौँ पुत्रसम्मलाई जन्मने बित्तिकै कंसले मा¥यो । देवकीको सातौँ गर्भलाई भने भगवती योगमायाले देवकीको गर्भबाट वसुदेवकी अर्की पत्नी रोहिणीको गर्भमा सारिदिइन् ।
शेष नागका अवतार मानिने बलरामले देवकीको सातौँ गर्भ भएर पनि रोहिणीको कोखबाट जन्म लिए । सातौँ गर्भ तुहिएको कुरा कंसलाई जानकारी गराइयो । पूर्वजन्ममा भगवान् विष्णुलाई आफ्नो सन्तानका रूपमा प्राप्त गर्ने वर पाएका देवकी र वसुदेवको आठौँ गर्भका रूपमा भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिनमा भगवान् अवतरित भए । भगवान्को जन्मसँगसँगै चतुर्भुजरूपमा भगवान् विष्णुको दर्शन देवकी र वसुदेवले प्राप्त गरे ।
श्रीकृष्णले आफूलाई गोकुलको नन्द बाबाको घरमा पुर्याउने र नन्दबाबाको घरबाट छोरीको रूपमा जन्मेकी योगमायालाई कारागार ल्याउने आदेश दिए । वसुदेवको हातका हत्कडीहरू आफैँ छुटे, कंसका सैनिकहरू मस्त निद्रामा परे, ढोकाहरू आफैँ खुले । घनघोर वर्षा भइरहेको कारणले यमुना कुर्लिरहेकी थिइन् तर पनि वसुदेवले बल्लबल्ल गोकुल पुगी यशोदाकी सन्तान योगमायालाई लिएर कारागारमा आए ।
कारागारमा आएपछि बल्ल सबै सैनिक ब्यँुझिए । कंसले बालिकारूपी योगमायालाई मार्न खोज्दा बालिका हातबाट फुत्किई आकाशमा गएर शक्ति स्वरूप भएर “तँलाई मार्ने बालक जन्मिसकेको छ पापी !” भनी अन्तध्र्यान भइन् ।
कंसले त्यो दिन गोकुलमा जन्मिएका सबै बालकहरूलाई मार्यो तर भगवान् श्रीकृष्णको दैवी शक्तिको अगाडि उसको केही जोर चलेन । कंसले कृष्णलाई मार्न पठाएका पूतना, चाणूर र मुष्टिजस्ता कैयौँ राक्षसहरूलाई कृष्णले बध गरे । कृष्णले अनेक लीलाहरू देखाए । जसलाई कृष्णचरित्र पनि भनिन्छ ।
कसंले आफ्नै बुवा उग्रसेन राजालाई बन्दी बनाई आफैँ राजा भएर सम्पूर्ण प्रजाहरूलाई दुःख दिने काम ग¥यो । धर्मकर्मको काम ठप्प भयो । असुरहरूको शक्ति बढ्यो र सज्जनहरूले पीडा अनुभव गर्नुप¥यो । संसार पूरै अस्तव्यस्त भयो ।
कंस, जरासन्ध, शिशुपाल, चाणूर र मुष्टि जस्ता राक्षसहरूको तागत बढ्दै गयो । जगत्मा व्याप्त हिंसा र अशान्तिलाई हटाएर सुख र शान्तिको व्यवस्थापन गर्न भगवान् श्रीकृष्ण अवतरित भएका हुन् ।
भगवान् श्रीकृष्णलाई विष्णुको पूर्णकला अवतार मानिन्छ । श्रीकृष्ण लीलापुरुष हुन् । आफ्नो जीवन कालमा उनले धेरै लीला गरे । कंश, शिशुपाल, चाणूर र मुष्टि जस्ता राक्षसहरूको बध गरे । श्रीकृष्णको अवतारसँगसँगै आसुरी प्रवृत्तिको अन्त्य भयो । पृथ्वीमा सत्य धर्म र अहिंसाले राहत पायो ।
युद्धबाट विरक्तिएका अर्जुनलाई आफ्नो कर्तव्य बुझाउन श्रीकृष्णले कुरुक्षेत्रको रणभूमिमा उपदेश दिए । ती भगवान्का पवित्र वाणीको संग्रहलाई श्रीमद्भगवद्गीता भनिन्छ । यसले बाटो बिराएकाहरूलाई मार्गनिर्देश गर्छ ।
भगवद्गीतामा शुद्ध आचार, शुद्ध विचार र शुद्ध कर्मलाई नै धर्म भनी परिभाषित गरिएको छ । श्रीकृष्णका वाणीहरूको सङ्ग्रह भगवद्गीताको अध्ययन हिन्दूहरूले मात्र नभई यसको महत्त्व बुझेका सबै धर्मावलम्बीले गर्ने गरेको पाइन्छ ।
यिनै भगवान् श्रीकृष्णको शुभ जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा द्वापर युगदेखि नै श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाइन्छ । गोकुलका गोप गोपिनीहरूले श्रीकृष्णको नामकरणका दिन विशेष नाचगान गरे । त्यो परम्परा भगवान् शिवजीलाई प्राप्त गर्न पार्वतीले गरेको व्रतोपासनसँग जोडिएर हरितालिका तिज पर्वका रूपमा रुपान्तरित हुन पुग्यो ।
श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका दिन विशेष विधिविधानसहित श्रद्धालु भक्तजनहरू व्रतोपासन गर्दछन् । दिनभरि निराहार रहेर भगवान्को नाम सङ्कीर्तन गर्नुका साथै गीता, भागवत आदि पाठ गर्दछन् । मध्यरातमा भगवान् श्रीकृष्णको जन्म भएको मानी कृष्णको प्रतिमालाई अनावरण गरेर पूजा गरी भजनकीर्तन गाई प्रसाद ग्रहण गरेपछि व्रत पूर्ण भएको मानिन्छ ।
यसप्रकार हिन्दूहरूको महान् पर्व श्रीकृष्णजन्माष्टमीले भगवान्को प्रिय बन्नको लागि सदा धर्मको पालना गर्नुपर्ने तथा मन, वचन र कर्म पवित्र राख्नुपर्ने सन्देश दिन्छ । यस्ता पर्वहरूलाई रमझमको रूपमा मात्र नहेरी यिनको मर्म बुझी सत्कर्म गर्न सके सबैको कल्याण हुनेछ, विश्वमा समता, शान्ति र अहिंसाको सुवास फैलिनेछ ।
आज विश्वभर हिन्दुधर्मावलम्बीहरूले भगवान् श्रीकृष्णको जन्मोत्सवको स्मरण गर्दै श्रीकृष्णजन्माष्टमी मनाइरहेका छन् । श्रीकृष्णजन्माष्टमी प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण अष्टमीमा पर्छ । संसार र धर्मको रक्षाका लागि तथा द्वापर युगमा बढ्दै गरेको
काठमाडौँ। भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन मनाइने ‘श्रीकृष्णजन्माष्टमी’ आज देशभरी भगवान् श्रीकृष्णको पूजा–आराधना गरी श्रद्धा–भक्तिपूर्वक मनाइँदैछ । ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता भगवान् श्रीकृष्णको जन्म द्वापरयुगमा भाद्रकृष्ण अष्टमी अर्थात् आजैका मध्यरातमा भएकाले
सर्वप्रथम यो लेख उनै योगेश्वरलाई समर्पण, जसको प्रतापले उनको बारेमा जान्ने र लेख्ने इच्छा जन्मियो । त्यसपछि मेरा समस्त ज्ञात÷अज्ञात गुरुहरुलाई समर्पण, जसका दीक्षाले यति लेख्न समर्थ भएँ । यो